दसैँमा ७४ हजारभन्दा बढी पशुपक्षी उपत्यका भित्रिए - Naya Patrika
दसैँमा ७४ हजारभन्दा बढी पशुपक्षी उपत्यका भित्रिए
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं | असोज १९, २०७४
दसैँमा मासुका लागि ७४ हजारभन्दा बढी पशुपक्षी काठमाडौं उपत्यका भित्रिएका छन् । त्यसमध्ये ४५ हजारभन्दा बढी खसी, बोका र करिब ५ हजार च्यांग्रा रहेको पशुपक्षंी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले दसैँमा मासु र मासुजन्य पदार्थको खपतका लागि भित्रने जिउँदो पशु चौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न उपत्यकाको सात स्थानमा पशु चिकित्सकको टोली खटाएको थियो । सोही टोलीको तथ्यांकअनुसार सप्तमीसम्म ७३ हजार ८ सय ७७ वटा पशुपंक्षी भित्रिएका हुन् ।
टोलीमा रहेका पशु चिकित्सक डा. हेमराज बोहोराले केही अस्वस्थ्य र केही मरेका चौपाया पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको जानकारी दिए । ‘मरेकालाई खाल्डो खनेर पुरियो’ उनले भने, ‘रोगीलाई रातो चिह्न लगाएर बिक्री नगर्न निर्देशन भएको थियो ।’ अनुगमन टोलीका प्रमख डा. बलबहादुर थापाका अनुसार रोगीलाई रातो चिह्न लगाए पनि पसलमा बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले उपचार गरेर ठीक भएको प्रमाणपछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने गरी निगरानीमा राखिएको थियो ।
चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघका अध्यक्ष गोविन्द पाठकले दसैँका वेला माग भएअनुसार खसी, बोका र चौपायाको आपूर्ति गरिएको जानकारी दिए । ‘दैनिक २५ गाडीसम्म खसी, बोका आयात गरेर भए पनि आपूर्ति गरिएको छ’ उनले भने । एउटा गाडीमा २ सय ५० खसी, बोका ढुवानी गर्न सकिन्छ । दसैँमा अधिकतम ५ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म जिउँदो खसी, बोकाको मूल्य निर्धारण भएको थियो । च्यांग्रा ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्ममा व्यवसायीले बिक्री गरेका थिए ।
बाटोमा खसी, बोका
सप्तमी र अष्टमीमा उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको सडकछेउमा खसी, बोका बगे्रल्ती राखिएको थियो । त्यस्तै, बिजुलीबजार, बबरमहलका सडक पनि खसी, बोका बिक्रीका लागि राखिएको थियो । मुख्यगरी कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर, बालाजु, चाबहिल, बानेश्वरसम्म खसी, बोका सडकपेटीमा राखेर बिक्री गरिएको थियो । सडकपेटीमा राखेर बिक्री गर्नेहरू संस्थागत व्यवसायी नभएको चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघले जनाएको छ । दसैँका वेला घरमा पालेर राखेका खसी, बोका सहरमा ल्याएर बिक्री गर्ने साना किसानले सडकपेटीमा राखेर बिक्री गर्ने गरेको संघको भनाइ छ ।
षष्टीमा १९ हजार भित्रिए
दसैँको छैटौँ दिन माछा, अन्डा, खसी, बोका, हाँस, भेडा, च्यांग्रा, राँगा, पाडा, भैँसी, कुखुरा, बँगुरलगायत १९ हजार २ सय दुईवटा भित्रिएका थिए । त्यसमध्ये थानकोटबाट ६ हजार ६ सय ३८, टुकुचाबाट १ हजार १ सय ६८, सतुंगलबाट १ सय ६९, सल्लाघारीबाट १ हजार १ सय २३, बालाजुबाट ३ हजार ८ सय ७८, कलंकीबाट ५ हजार ६ सय ५१ को स्वास्थ्य परीक्षण गरी तथ्यांक संकलन गरिएको डा. बोहोराले जानकारी दिए।